ह'रेक दिन यस'री लिनुहोस् बा'फ, मिल्छन् य'स्ता फाइदै फा'इदा - HPsanchar.com
October 21, 2020 biplov adhikari घरेलु तरिका 0
चि’सो होस् वा छा’लाको हेरचाह गर्न वाफ एक धेरै राम्रो प्रक्रिया हो । कुनै साइड इफेक्ट नहुने र स्वा’स्थ्यको फाइदा वाफको बारेमा चर्चा गर्नेछौ । चिसोमा वाफ लिनु भनेको रामवाण जस्तै उपाय हो । वाफ लिनाले चिसो मात्र ठिक नबनाई घाँटीमा ज’मेको कफलाई कुनै समस्या बिना नै सजिलै हटाउछ । छालाको फोहोर हटाउने र छालालाई प्राकृतिक चमक दिने एक उत्तम तरिका वाफ हो । यस विधिले कुनै मेकअप उत्पादन प्रयोग नगरी छालाको चमक बनाउन सक्छ । वाफ जस्तो अवस्थाका बिरामीलाई पनिलाभदायक साबित हुन्छ । डाक्टरहरुले यस्तो अवस्थामा वाफ लिन सल्लाह दिन्छन् । जसले बिरामीलाई लामो समयसम्म आराम मिल्छ । वाफले अनुहारको मृत छाला हटाउन र झिम्का कम गर्ने एक समाधान हो । यसले छालालाइृ ताजा बनाउछ र स्फुर्ति बढाउछ । जसले छालाको ओस पनि राख्छ । यदि अनुहारमा ड’न्डिफोर भएमा वाफ लिनु राम्रो उपाय हो । यसले गन्ध र सेबमलाई सजिलै छुटकारा दिन्छ । यसले छाला सफा गर्दछ ।
फर्सीको मु’न्टा मि’ठो मात्र हैन छन् अने’कौँ फाइदा ! फर्सीको मु’न्टा भन्नसाथ तपाईंको मु’खमा पानी आउँछ । धेरैका लागि यो स्वादिलो सब्जी हो । बेथे र लट्टेको स्वाद पनि ति’ख्खर हुन्छ । अतः यी सबै अहिलेको मौसमी सागपात हुन् । मौसम अनुकुल सागपात किन खाने ? दुई कारण छन् । एक, यसमा असली स्वा’द पाउन सकिन्छ । दोस्रो, आवश्यक पौ’ष्टिक तत्व पाइन्छ । हुन त हामी वे’मौसमी खानेकुरा खोजिरहेका हुन्छौ । तर, वे’मौसमको खानेकुरा श’रीरका लागि त्यती ला’भदायक हुन्दैन । किनभने वे’मौसमी उत्पादनका लागि कृ’तिम शैली अपनाइन्छ । प्रा’कृतिक रुपमा उ’ब्जाउ भएको हुँदैन । त्यसैगरी वेमौसमी खानेकुरा फलाउन, भण्डारण गर्न केही यस्ता तरिका अपनाइन्छ, जो त्यती स्वस्थ्यकर हुँदैन । अहिले वर्षायाममा सुरु भइसकेको छ । यतिबेला फर्सीको मु’न्टा, बे’थे, ल’ट्टे जस्ता सागपात प्रशस्तै पाइन्छ । यी सागपात निकै लाभदायक हुन्छ, स्वा’स्थ्यका लागि ।